Renaissance, album ọhụrụ nke Beyoncé, enweelarị ụbọchị mwepụta | Bezzia
Renaissance, album ọhụrụ nke Beyoncé, enweelarị ụbọchị ewepụtara
Maria onyekwere | 19/06/2022 22:00 | Akụkọ
Beyoncé kwuputara nkenke n'izu a mmalite nke Renaissance. Ọrụ ọhụrụ a na-abịa afọ isii ka e mechara album ikpeazụ ya bụ Lemonade nke ahọpụtara ya maka album kacha mma nke afọ na Grammys wee nweta ihe nrite maka ọba egwu obodo mepere emepe kacha mma.
The mmegharị na netwọk mmekọrịta nke ndị na-ese ihe na-ebukarị ọkwa dị mkpa. Nke Beyonce abụghịkwa ihe ọzọ. Ihe niile bụ atụmatụ iji gosipụta Renaissance Act 1, akụkụ mbụ nke ọba nke a ga-ebipụta n'ọtụtụ omume. Edere ya na Julaị 29Ọ dị onye nwere obi abụọ na ọ ga-enye ọtụtụ ihe ikwu okwu?
Beyonce bụ ya omenkà nwere ọtụtụ ihe nrite Grammy nke akụkọ ihe mere eme, 48 na niile. Ogologo ya na akụkọ ihe mere eme nke ọma pụtara na mgbasa ozi ọ bụla na-enwe mmetụta zuru ụwa ọnụ na-akpaghị aka. Okwu ole na ole edere, onye na-ese ihe adịghị mkpa ihe ọ bụla ọzọ maka onye ọ bụla ikwu banyere nlọghachi a na-echere ogologo oge.
2 ya ọhụrụ oru ngo
Kedu ihe anyị maara banyere Renaissance taa? E wezụga eziokwu na a ga-ahapụ ihe omume mbụ na July 29, obere ihe ọzọ mere site na ọrụ a. naanị anyị maara nke ahụ Ọ ga -abụ abụ iri ise sitere n'ike mmụọ nsọ wee dee ya kemgbe 2020.
Na onye na-ese ihe na-arụ ọrụ ọhụrụ a ruo ọtụtụ afọ abụghị ihe ọhụrụ. N'ajụjụ ọnụ e mere n'afọ gara aga, onye na-ese ihe gosipụtara na ọ na-eyi afọ na ọkara na studio. Banyere ihe mgbaru ọsọ ya na ọrụ ọhụrụ a, o kwuru mgbe ahụ: "Site na mpụ niile na ikpe na-ezighị ezi nke afọ gara aga, echere m na anyị niile dị njikere ịgbanahụ, njem, ịhụnanya na ịchị ọchị ọzọ." "Ọ dị m ka enwere mweghachi na-abịa, achọrọ m ịbụ akụkụ nke ịkwalite mgbapụ ahụ n'ụzọ ọ bụla m nwere ike. ", ọ gbakwụnyere.
Anyị ga-echere ruo Julaị 29 ka anyị gee ntị n'akụkụ mbụ nke ọrụ egwu ọhụrụ a. Ma, ọ bụghị nke ukwuu inwe ọtụtụ nkọwa banyere nke a, ma ọ bụ otú anyị nwere olileanya!
ya ọhụrụ oru ngo
Eziokwu ahụ bụ na afọ isii agafeela kemgbe Beyoncé bipụtara ọrụ ikpeazụ ya apụtaghị na a kwụsịrị ya. Ebe ọ bụ na 2006 onye na-ese ihe na-ekere òkè na ọrụ dị iche iche dị ka Ndị Carter, ọrụ egwu nke ọ na-ekerịta di ya Jay-Z. Na nke ha wepụtara album ihe niile bụ ịhụnanya na 2018.
Otu afọ mgbe e mesịrị, onye na-ese ihe dere ma nye olu ọtụtụ egwu nke ụdị ọhụrụ nke Disney kpochapụwo The Lion King. Na mgbakwunye na onye na-ese ihe, kpakpando ndị ọzọ dị ka Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrel Williams ma ọ bụ nwa ya nwanyị Blue Ivy jikọrọ aka na ya. Otu n'ime egwu dị na ụda ụda, Black Parade, meriri Grammy 2021 maka arụmọrụ R&B kacha mma, na-enye Beyoncé gramophone ọla edo nke iri abụọ na asatọ.
N'otu afọ ahụ onye na-ese ihe nyere olu ka ọ dị ndụ, egwu sitere na ụda ụda nke Usoro Williams. Beyoncé mepere ihe nrite 94th Academy Awards site na mmemme nke isiokwu a na ogige tenis nke Tragniew Park na Compton, ya na Blue Ivy Carter, ndị ihe nkiri King Richard, Saniyya Sidney na Demi Singleton, na Compton Cowboys Junior Equestrians.
Onye na-ese ihe agbakọkwara aka na ndị nka dị iche iche dịka ndị Onye na-agụ egwú Megan Thee Stallio na remix nke Savage na 2020 ma ọ bụ Nicki Minaj onye ya na ya kpakọrịta na 2021 enweghị ntụpọ,
Ebe ọ bụ na ọ ghọrọ onye ama ama na ngwụcha 1990 dị ka onye ndu onye na-abụ abụ nke ụmụ nwanyị R&B Destiny's Child, ọrụ Beyoncé etoola. Na 2014, etinyere ya na ndepụta nke magazin Time 100 ndị kacha nwee mmetụta n'ụwa na na Machị 14, 2021, n'oge emume Grammy Awards, o mere akụkọ ihe mere eme site n'ịghọ nwanyị nka kacha enye onyinye n'akụkọ ihe mere eme nwere ngụkọta nke onyinye iri abụọ na asatọ.
N'ime ogbo ikpeazụ ya, onye na-agụ egwú ekwupụtala onwe ya dị ka ntụaka na akwụkwọ akụkọ oji obodo mgba megide ịkpa ókè agbụrụ. N'echiche a, n'afọ 2020, o wepụtara 'Black Is King', ihe nkiri a na-ahụ anya na-asọpụrụ mgba nke obodo ojii yana enwere ike ịhụ na Disney +.
Ị chọrọ ịnụ ihe dị ọhụrụ na Beyoncé?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Renaissance, album ọhụrụ nke Beyoncé, enweelarị ụbọchị ewepụtara
Sunbathing gba ọtọ na uru ya bụ isi